४२ हजार फिट माथी उडेको जहाजमा जन्मिने यि भाग्यमानी को हुन् ? जसले पाइन् जन्मदा बित्तिकै यत्रो बिधि चर्चा – live 60media
४२ हजार फिट माथी उडेको जहाजमा जन्मिने यि भाग्यमानी को हुन् ? जसले पाइन् जन्मदा बित्तिकै यत्रो बिधि चर्चा
एजेन्सी- एक महिलाले ४२ हजार फिटको उचाइमा बच्चा जन्माएकी छन्। राजधानी कानकरीबाट बुर्किनाफासोको बागाडुग गइरहेको टर्किस् एयरलायन्सको जहाजमा नफी डियबी नाम गरेकी महिललादे छोरी जन्माएकी हुन् ।
बिमान टेकअफ हुनेवित्तिकै सुत्केरी व्यथा लागेकी उनले बिमानमै छोरी जन्माएको बताइएको छ ।
उनलाई केही यात्रीले सहयोग गरेको बताइएको छ ।जहाजका चालक दलका सदस्य र यात्रुले बच्चाकोनाम कडिजु राखिदिएका छन्। अहिले आमा र बच्चा दुबै स्वस्थ रहेको बताइएको छ । उनीहरुलाई डाक्टरको हेरविचारका लागि अस्पतालमा राखिएको छ
यो पनिपढ़नु होस:काठमाडौ । एक जना पुरुषले फेसवुकमा लभ परेर युवतीलाई दोस्रो श्रीमती बनाएर ल्याए । उनले पहिलो श्रीमती गुमाएका थिए । पहिलो श्रीमतीको निधन पछि उनी दोस्रो श्रीमतीको खोजीमा भएकै बेला एक युवती फेसवुकमा फेला परिन् । ति युवतीसंग कुराहुँदै जाँदा माया बस्यो । परिवारका सदस्यसंगको सहमतिमै उनीहरुको विवाह भयो । तर उनको त्यो विवाह पनि सुखद भएन ।
← शो’कमा डुबेको भागरथीको परिवारलाई मनकारीले दिए वर्षभरि खान पुग्ने खाद्यान्न
महिलालाई ए’सिड हान्दा सारा देश बोल्छ, तर मलाई ए’सिड हाँन्दा कसैले केही बोलेन (हेर्नुहोस भिडियो) →